တောင်ကိုးရီးယားရဲ့ နေရာအနှံ့အပြားမှာ တွေ့နိုင်တဲ့ EXO’s Kai ရဲ့ မျက်နှာလေး… | News Bar Myanmar
KAI ဟာ သူများနဲ့မတူတဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်၊ ခန္တာကိုယ်အချိုးအစား ရှိတဲ့အပြင် အသံကပါ ထူးခြားနေတဲ့အတွက် luxurious Brand တော်တော်များများက Brand Ambassador အဖြစ် Kai ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး Exhibition တွေကပါ Kai ပုံရိပ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် Kai ရဲ့ မျက်နှာကို South Korea ရဲ့ နေရာအနှံ့အပြားမှာတွေ့နေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
1. ANDY WARHOL ART EXHIBITION “Andy Warhol: The Beginning” အနုပညာပြပွဲ 2021 ခုနှစ်အတွက် Kai ဟာ Voice Ambassador အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ Andy Warhol: Beginning ကြော်ငြာတွေကလည်း Seoul မြို့ရဲ့ Hyundai Seoul မှာ နေရာအနှံ့ပြသထားပါတယ်။ ပြပွဲကတော့2လပိုင်း 25 ရက်နေ့ကနေ6လပိုင်း 27 ရက်နေ့အထိ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2. BCC ‘BlackYak Climbing Crew’KAI ဟာ BCC Brand ရဲ့ ‘BlackYak Climbing Crew’ အတွက်လည်း ကြော်ငြာ model အဖြစ် ရွေးချယ်ခံထားရသူပါ။ ဒီ Brand အတွက် ရိုက်ကူးထားတဲ့ Kai ရဲ့ ကြော်ငြာတွေဟာ တောင်ကိုးရီးယားရဲ့ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာရှိနေပါတယ်။ Kai ရဲ့ မျက်နှာလေးကို BCC store ဆိုင် တွေမှာ အပြင် ရထားဘူတာရုံတွေ bus တွေ နဲ့ တခြား public place တွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
3. GUCCI : ‘KAI x Gucci Collection’Gucci Brand ရဲ့ Global Brand Ambassador ဖြစ်တဲ့ Kai ဟာ ဒီနှစ်စပိုင်းမှာ ‘KAI X Gucci Epilogue Collection’ ဆိုပြီး သူ့နာမည်သုံးကာ Special Collaboration လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Kai ရဲ့ ကိုယ်စားပြု theme ဖြစ်တဲ့ ဝက်ဝံပုံ ပါတဲ့ item တွေကို အဓိကထား ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး sold out တဲ့ အထိရောင်းကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Collection အတွက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Kai ရဲ့ Photo တွေကိုလည်း South Korea ရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
တောင်ကိုးရီးယားရဲ့ မျက်နှာစာတိုင်းလိုလိုမှာ ခုလိုနေရာယူထားနိုင်တာဟာ Kai ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအားကောင်းလွန်းလို့ပါ။ Solo album လည်း ထွက်ရှိထားတဲ့အပြင် Kai ရဲ့ ကောင်းသတင်းတွဟာ ခုလို တရိပ်ရိပ်ထိုးတက်နေတဲ့အတွက် Kai ရဲ့ ပရိသတ်တွေတော့ ဂုဏ်ယူစွာ ဝမ်းမြောက်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Next ဒီနှစ်မှာ အသက် ၃၀ ပြည့်တော့မဲ့ Baekhyunee ပြောတဲ့ သူ့ရဲ့အတိတ်နဲ့ အနာဂတ် Plan အကြောင်း »
Previous « Kai ရဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းကပုံလေးတွေက K netizen တွေကြားမှာ ဘယ်လို hot သွားလည်း ဆိုတော့...